संसारकै ‘हटेस्ट मम !’ केही तस्विर हेरेर आमा छोरी छुट्ट्याउन सक्नुहुन्छ ? | Pennepal
Home रोचक समाचार संसारकै ‘हटेस्ट मम !’ केही तस्विर हेरेर आमा छोरी छुट्ट्याउन सक्नुहुन्छ ?
संसारकै ‘हटेस्ट मम !’ केही तस्विर हेरेर आमा छोरी छुट्ट्याउन सक्नुहुन्छ ?
एजेन्सी । क्यालिफोर्नियाकी ४३ वर्षीया जोलिन डियाजलाई सोसल मिडियामा ‘संसारकै हटेस्ट मम’ को संज्ञा दिइएको छ । उनको तस्बिरमा लाखौंले उनलाई छोरीभन्दा पनि जवान देखिएको बताउने गरेका छन् । कतिले त आमा–छोरीलाई दिदी–बहिनी जस्तो देखिने गरेको बताउँछन् ।
‘म मेरो छालाको हेरविचार पारम्परिक तरिकाले गर्छु । म दैनिक बिहान र राती सुत्नुअघि मुख धुन्छु,’ जोलिनले एक अन्तर्वार्तामा भनिन् । ‘मैले निकै सानो उमेरदेखि नै आफ्नो छालाको हेरविचार गर्न सुरु गरेँ, लगभग १२, १३ वर्षदेखि । मेरी आमाले ‘मेरी के’ का सामग्री किन्नु हुन्थ्यो र मैले कसैले थाहा नपाउने गरी आमाका स्किन केयर प्रोडक्ट प्रयोग गर्न थालेँ ।’
‘सुन्दर छालाले मलाई आत्मविश्वास प्रदान गरेको छ,’ डियाजले भनिन् ।छोरीलाई एक्लैले हुर्काएकी आमाले मिलानीले पनि १२ वर्षको उमेरदेखि नै स्किनकेयर रुटिन फलो गर्दै आएको बताएकी छिन् ।
दिल्लीमा चक्र्यो हिंसा ज्यान गुमाउने १० पुगे
१८ वर्षमा ३ पिलर, साइकलबाट पुल तरेको १० रुपैयाँ
घरमै सेनिटाइजर बनाउन चाहनु हुन्छ ?यस्तो छ विधि
साइकल चढनेलाई मापसे कानुनु !